vesselsgbọ mmiri anaghị agba nchara maka mmiri
by Delta Injinịa / Tọzdee, 20 Jenụwarị 2015 / bipụtara Njikwa ego
Vesselsgbọ ndị a na-ahụ maka igwe anaghị agba nchara bụ tankị maka nchekwa mmiri gị dịka nrapado viscous dị ala, mmanụ, wdg.
emere ha na AISI304 ma obu 316 ma dozie ntuzi nke ihe akporo European Pressure 97/23 / EC.
Ha na-abia nha dị iche iche dịka ike gị maka ịmịpụta ya na dayameta nke 140 mm ruo 400 mm. Vesselskpụrụ ụgbọ mmiri ọkọlọtọ bụ; 4L, 12L, 20L, 45L, 60L. Wezụga ndị a, enwere nhọrọ mgbe niile maka mkpa gị.
Ọtụtụ nhọrọ dị, dabere na usoro mmepụta gị na njirimara ngwaahịa a. Ihe atụ nke nhọrọ bụ: ọkwa nchoputa na-enweghị ịkpọtụrụ na ngwaahịa, igwekota ma ọ bụ recirculation iji mee ka akụkụ na nkwusioru, agụụ, akpaka refilling nke ngwaahịa, kpo oku, wdg
ATEX nhọrọ dịkwa.
Vesselsgbọ ndị nrụgide na-agba mbọ hụ na echekwara ngwaahịa ahụ n'enweghị nchekwa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ozi ndị ọzọ ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, aro ma ọ bụ nkọwa, biko kpọtụrụ anyị na: